सोया लेसिथिन मूल्य, Bolise बाट आपूर्तिकर्ता
[अन्य नाम] सोयाबीन लेसिथिन; सोया लेसिथिन
[उपस्थिति] हल्का पहेंलो ठीक पाउडर
1. सोया लेसिथिन रोकथाम र atherosclerosis को उपचार को लागी प्रयोग गरीन्छ।
२. यो डिमेन्शिया को घटना रोक्न वा ढिलाइ हुनेछ।
३. यो विषाक्त पदार्थ को शरीर भंग गर्न सक्नुहुन्छ, सेतो छाला को प्रभावकारी मालिक।
4. सोया लेसिथिन सीरम कोलेस्ट्रॉल को स्तर घटाउने, सिरोसिस रोक्न, र कलेजो को कार्य को रिकभरी मा योगदान को कार्य छ।
5. यो थकान हटाउन, मस्तिष्क को कोशिकाहरु तेज, अधीरता, चिड़चिडाहट र अनिद्रा को कारण तंत्रिका तनाव को परिणाम सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
सोया लेसिथिन को बारेमा
यो एक धेरै फराकिलो आवेदन छ किनकि यो एक पायसी उत्पादन हो। यो मेयोनेज, चकलेट, चकलेट, मार्जरीन, आइसक्रीम, कुकीज र गम जस्तै विभिन्न खाद्य उत्पादनहरु को निर्माण मा प्रयोग गरीन्छ।
सोया लेसिथिन तपाइँको पाक र शरीर को हेरविचार व्यञ्जनहरु मा थप्न को लागी एक अद्भुत घटक हो। यो धेरै लाभदायक गुणहरु छन्, र एक पायसीकारी, thickener, स्टेबलाइजर, हल्का परिरक्षक, moisturizer, र कम गर्ने को रूप मा प्रयोग गरीन्छ। लेसिथिन लगभग कुनै पनी नुस्खा मा उपयोग गर्न सकिन्छ, र सामान्यतया दुबै खाना र कस्मेटिक उत्पादनहरु मा पाइन्छ।
प्रसाधन सामग्रीमा, सोया लेसिथिनलाई मोइस्चराइजर, मेकअप, शैम्पू, कन्डिसनर, शरीर धुने, ओठको बाम र अन्य धेरै उत्पादनहरूमा थप्न सकिन्छ। सोइ लेसिथिन पनि अन्य इमुल्सिफाइंग र स्टेबलाइजिंग एजेन्टहरूको लागि उत्तम विकल्प हो, जसमध्ये केही पेट्रोकेमिकल स्रोतहरूबाट लिइएको हो।
यो यसको फराकिलो कार्यात्मक र पोषण गुणहरु को लागी प्रयोग गरीन्छ।